China HDPE zokuxhumana tube ifektri abakhiqizi | UShengyang
◎ Corrosion ukumelana nokuphila isikhathi eside
Ezindaweni ezisogwini, amanzi angaphansi komhlaba aphakeme futhi umhlaba unomswakama. Ukusetshenziswa kwensimbi noma amanye amapayipi kufanele kube yi-anticorrosive, futhi impilo yensizakalo ngokuvamile iba yiminyaka engama-30 kuphela. Amapayipi e-PE angamelana nezinhlobonhlobo zemidiya yezindaba, futhi awathinteki ukubola kwenhlabathi.
◎ Ukuqina okuhle nokuphambuka
Ipayipi le-PE yipayipi lokuqina eliphezulu elinokunwebeka ngesikhathi sekhefu elingaphezulu kuka-500%. Ikhono lokuzivumelanisa nokuhlala okungalingani komhlaba kanye nokuhlukaniswa kunamandla kakhulu. Ukumelana Okusha ukushaqeka. Amapayipi amancane angalinganiswa ngokukhululeka.
◎ Udonga lwamapayipi lubushelelezi, i-coefficient ye-friction incane, ikhebula kulula ukulidlula, ukusebenza kahle kokwakha kuphezulu, futhi izindleko zokwakha ziphansi.
◎ Ukusebenza kahle kokufakwa kukagesi, impilo yokusebenza isikhathi eside (iminyaka engaphezu kwengu-50 yamapayipi angaphansi komhlaba), ukusebenza okuqinile, futhi okuphephile nokwethembekile komugqa
◎ Isisindo esincane, ukugcinwa, ukufakwa nokwakhiwa, ukugcinwa okulula, ukuthuthwa okulula nokusebenza
◎ Amapayipi amancane angakwazi ukugoqwa, anezingxenye zamapayipi amade, amalunga ambalwa, nokufakwa okulula
◎ Amapayipi angenziwa ngemibala eminingi ukukhombisa umehluko
◎ Excellent ongaphakeme lokushisa umthelela ukumelana
Izinga lokushisa lokushisa eliphansi le-PE liphansi ngokwedlulele, futhi lingasetshenziswa ngokuphepha ebangeni lama-20-60C. Ngesikhathi sokwakhiwa ebusika, ipayipi ngeke libhidlike ngenxa yomthelela omuhle walokho okubalulekile.
◎Ukumelana okuhle kwemihuzuko. Uma kuqhathaniswa namanye amapayipi wensimbi, ipayipi le-PE linokuphikiswa kokugqokwa okuphindwe kane kunamapayipi wensimbi
◎ Kulula ukuxhuma, ingasebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokwakha ezintsha
Ngaphezu kwezindlela zendabuko zokumbiwa kwamapayipi e-PE, kungasetshenziswa nobuchwepheshe obusha obuhlukahlukene bokumba, njengokufaka amapayipi, ulwelwesi amapayipi, amapayipi aqhephukile, njll.
I-Hdpe Porous Grid Communication Pipe
Okuqinisekisiwe Kushintshwe Polyvinyl chloride (MPVC-SR ...